संसारकै सबैभन्दा मोटो बालकले यसरी घ’टाए ४ वर्षमा १०८ किलो तौल, विश्व नै चकित ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/संसारकै सबैभन्दा मोटो बालकले यसरी घ’टाए ४ वर्षमा १०८ किलो तौल, विश्व नै चकित !
संसारकै सबैभन्दा मोटो बालकले यसरी घ’टाए ४ वर्षमा १०८ किलो तौल, विश्व नै चकित !
एजेन्सी । संसारकै मोटो बालक आर्या परमानाले क’डा मेहनत गरेर १०८ किलो तौल घ’टाएर सबैलाई चकित पारेका छन् । उनको तौल १९३ किलो रहेको थियो । आर्याको नयाँ रुपले सबैलाई चकित बताएको छ । उनको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका तस्बिरले पनि उनको क’डा परिश्रम झ’ल्काएको छ ।
डेली मेलमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार आर्या परमानाको तस्बिर र भिडियो अदे राय नामका एक प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेका हुन् । भिडियोमा आर्याको अहिलेसम्मको यात्रा देखाइएको छ । उनको यो मेकओभरको पछाडि भ्यारिएट्रिक सर्जरी, डाइट प्लान र दैनिक कसरत भएको उनको पिताले बताए ।
आर्याको एउटा सर्जरी भइसकेको छ । तर उनको शरीरमा अझै पनि झोलिएका छालाहरु बाँकी छन् । ती छाला हटाउनको लागि कमसेकम २ पटक सर्जरी गर्नुपर्ने डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
आर्याले २०१६ बाट तौल घ’टाउन सुरु गरेका थिए । ट्रेनर अदेका अनुसार सुरुमा उनले आर्याको दिनचर्याको बारेमा सोधपुछ गरे र सन्तुलित आहाराबाट उनको तौल घ’टाउन प्रयास गरेका थिए ।
दुखद खबर : पर्वतमा पहिरोले घर पुरिँदा तीन वर्षीया बालिकाको मृत्यु